2012-04-15 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Bigasoft AVI Converter v3.6.15.4478
​ဒီ converter ​က​တော့ format ​ပေါင်း​စုံ​က​နေ ​ပြီး​တော့ dvd video ​အ​ခွေ​လုပ်​ဖို့​အ​တွက် ​အ​ရည်​အ​သွေး​ကောင်း​တဲ့ avi format ​ကို​ပြောင်း​ပေး​တဲ့ software ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. all video format to avi format converter ​ပေါ့. ​သုံး​ရ​တာ ​လွယ်​ကူ​တဲ့​အ​ပြင် ​အ​ရမ်း​ကို​လဲ ​မြန်​ပါ​တယ်.
Epson TX121 & ME 320 ​အ​တွက် resetter ​ပါ
winechit: ​အ​ကို ​ကျွန်​တော် ​မေး​ထား​တာ​လေး​ကော ​ရ​ရဲ့​လား​ခင်​ဗျာ EpsonTX121 Resetter
​ကဲ ​ကို​ဝိုင်း​ချစ်​ရေ ​အောက်​မှာ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​ပြီ​ဗျာ. ​အ​ပေါ်​က ​ခေါင်း​စဉ်​က​လို​မျိုး​ပဲ . Epson TX121 ​နှင့် EPSON ME-320 ​နှစ်​မျိုး​စ​လုံး ​အ​တွက် ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ ​တယ်. ​ခေါင်း​စဉ်​မှာ ​မြန်​မာ​လို ​ထည့်​ထည့်​ထား​တာ​က​တော့ ​အ​ကြောင်း​ရှိ​လို့​ပါ. ​တ​မင်​မြန်​မာ​လို ​ထည့်​ရေး​ထား​တာ​ပါ. ​ကဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ် ​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ ​တယ်. ​အောက်​မှာ ​သင့်​တော်​တဲ့ Link ​က​နေ​သာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ.
Download minus | Mediafire | ifile
Download Dell Inspiron N4030 Windows7(32bit)
kyawkyaw555@gmail.com : ​အ​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​မ​င်္ဂ​လာ​ပါ ​ကျ​နော့်​စက် dell inspiron n4030 ​အ​တွက် ​ဝင်း​ဒိုး​အ​သစ်​တင်​ပြီး driver ​တွေ​လို​နေ​လို့ ​ကျ​နော်​ရှာ​တာ​မ​ရ​လို့ ​ပြီး​တော့ DriverPack Solution 11 (x32-x64) ​ဆို​တဲ့ ​ဆော့​ဝဲလ်​နဲ့ ​လုပ်​တာ​လဲ ​မ​ရ​လို့​ပါ ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး ​အ​ကို​မ​အား​တဲ့​ကြား​က ​ခု​လို ​အ​လုပ်​ပေး​မိ ​သ​လို​ဖြစ်​သွား​တဲ့ ​အ​တွက်​တောင်း​ပန်​ပါ​တယ် ​ကျ​နော်​လဲ ​ဘယ်​လို​မှ ​မ​ရ​တော့​လို့​ပါ ..
​ကျွန်​တော်​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် ​ကို​ကျော်​ကျော်​ရေ. ​ကို​တင်​ထား​တဲ့ window ​က 32bit ​လား 64 bit ​လား​ဆို​တာ​ကို ​အ​ရင်​ဦး​ဆုံး ​စစ်​လိုက်​ပါ. ​စစ်​ပြီး​တော့​မှ ​သက်​ဆိုင်​ရာ Driver ​ကို download ​လုပ်​လိုက်​ပါ. ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​မိ​ပါ​တယ်.
Download Dell Inspiron N4030 Windows7x32 Drivers (32 bit)
Dell Inspiron N4030 Driver Windows7x32-32 bit
PLDS DS-8A5SH 12.7 SATA Trayload DVDRW Firmware
Conexant D400,External USB 56K Modem Diagnostics Utility
AMD ATI Mobility Radeon™ HD 530v
Driver Dell Inspiron N4030 Driver Windows7x32-32 bit